Ganacsatada reer Holland ayaa qorsheynaya inay ka aas aasaan wax soo saarka shiilanada Faransiiska Kazakhstan - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Safiirka aan caadiga aheyn ee awooda u leh Boqortooyada Netherlands u fadhiya Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Tajikistan Andre Kartens ayaa soo gaarey gobolka Zhambyl si ay uga wada hadlaan mashaariicda guud, sida uu ku soo waramayo wariyaha Kazinform.
Sida laga soo xigtay adeegga saxaafadda ee akim ee gobolka Zhambyl, shirkadda Dutch "Farm Frites Beheer" oo ay weheliso LLP "K-Agro Holding" maxalliga ah ayaa qorsheyneysa inay ka dhisto warshad soo saarista shiilannada Faransiiska ee gobolka Shu. Mashruuca waxaa lagu qiyaasay $ 145 milyan. Haddii la hirgaliyo, 240 shaqooyin cusub ayaa la abuuri doonaa. Waxaa la qorsheeyay in la howlgaliyo warshadda sanadka 2023. Madaxa gobolka, Berdibek Saparbayev, intii uu socday kulan uu la yeeshay Safiirka aan caadiga ahayn ee Boqortooyada Netherlands, wuxuu xaqiijiyay in maalgashadayaasha la siin doono taageero buuxda. Waqtigan xaadirka ah, meesha dhirta mustaqbalka ayaa horeyba loo tilmaamay, kaabayaasha lagama maarmaanka ah ayaa la dhisay. “Hawsha ugu weyni waa in si dhakhso leh loo bilaabo dhismaha. Waqtigu wuu socdaa. Waxaan u baahanahay shirkad, wax soo saarkiisa waa la dhoofinayaa, ayuu yiri Berdibek Saparbayev. “Dib u dhaca ku yimid dhismaha wax faa’iido ah nooguma jirto. Waxaan si khaas ah ugu imid inaan ogaado su'aalaha jira. Erayadaada waxaan ka fahmay inaan isku ujeedooyin leenahay, ”ayuu Andre Kartens ku jawaabay. Sida laga soo xigtay Zhenis Oserbai, la taliyaha gudoomiyaha guddiga maamulka ee shirkadda K-Agro Holding, ka hor inta aan la bilaabin dhismaha warshadan, maalgashadayaashu waxay rabaan inay ku beero baradhada 65 hektar oo ay hubiyaan heerka wax soo saar. Kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka beeraha Nurbek Daiyrbekov, kaas oo xusay rajada laga qabo mashruucan wadajirka ah wuxuuna carabka ku adkeeyay inay suurtogal tahay in mashaariic kale lala fuliyo dhinaca Holland.
Tags: Farm FreedKazakhstanWax soo saarka shiilan ee Faransiiska